I-Villa Zaza, i-Oasis kwiNdalo eNgachukunyiswanga
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguDubravko
Impahla yethu entle ibekwe cca 40 km ukusuka Zagreb, e Zagorje, enye yemimandla enemibala kakhulu yelizwekazi Croatia. I-Estate ilele kumhlaba omangalisayo oyi-2.000 m2 kwaye izele zizityalo ezingaqhelekanga, imithi kunye neentyatyambo. Ukuqhelaniswa nelifa yi-SW-W enika iindwendwe zombini - ilanga elininzi emini kunye nombono omangalisayo ngokutshona kwelanga.
Amanqaku amathathu aphambili ale ndawo yi-villa, indawo yokuqubha kunye nendlu yeendwendwe ezihlala elunxwemeni.
I-villa enkulu ijikelezwe ziindawo ezimbini ezivulekileyo ezingena kumgangatho osezantsi kunye netafile yokutyela yeshumi, ikhitshi elihle, elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlala elikhulu elinendawo yomlilo. Ikona yeBella Vista enezitulo ezintlanu ezitofotofo ibekwe kwicala elingasentshona lomgangatho ophantsi-umbono kunye nokutshona kwelanga kuyaphefumla!
Kumgangatho wokuqala umntu unokufumana i-master bedroom ene-terrace enkulu, igumbi lokuhlambela elihle le-jacuzzy kunye negumbi elincinci elinesofa yokutsala yababini.
Kumgangatho wesibini kukho elinye igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela elineshawa ye-massage, kunye ne-lobby enetafile yokubhala yakudala kunye nokukhupha i-soffa yababini.
Idama lokuqubha li-8,5 x 4,5 m, lixhotyiswe ngomatshini wokuqubha kunye neshawari yelanga.
I-swimming pool ivuliwe ukusuka kwi-1.5.-15.10.
Indlu yeendwendwe ikufuphi nequla lokuqubha. Yindlu esemaphandleni eneveranda enkulu. Inekhitshi, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala, kunye negumbi lokulala elihle kakhulu kumgangatho wesibini elijongene nedama lokuqubha.
Le estate ibekwe kwindawo ezolileyo kakhulu kwaye ehlaziyayo egcwele izixeko ezincinci, iilali ezinemveliso yokutya kwasekhaya kunye neenqaba zembali.
Ngexesha elifanayo lisondele kakhulu kwi-capital yaseCroatia yaseZagreb (imizuzu engama-30 ngemoto), ukuya elwandle lwaseCroatia (ngaphantsi kweeyure ezimbini ngemoto) okanye kumachibi ePlitvice (imizuzu engama-90 ngemoto).
Ukupheka kwemihla ngemihla, inkonzo yokucoca inokongezwa nguNada wethu olunge kakhulu ekulungiseleleni izinto ezikhethekileyo zasekhaya.
Le yiparadesi yokwenene nangaliphi na ixesha lonyaka!
4.92 ·Izimvo eziyi-63
4.92 · Izimvo eziyi-63
Umbuki zindwendwe ngu- Dubravko